ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံးမိခင် - YOYARLAY Digital Media and News
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဘယ်အရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သလဲ? ခင်ဗျားတို့ အများစုက ဖြေကြမယ်.. အပျိုဖော်ဝင်စ ၁၃၊၁၄၊၁၅ နှစ်လောက်ကပေါ့… ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဒါဟာ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့အငယ်ဆုံး မိခင်ရဲ့ အသက်ကို ကြားလိုက်ရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ မျက်လုံးတွေ ပြူးကုန်မှာ အမှန်ပါပဲ..
၁၉၃၉ ခုနှစ်ရဲ့ မထင်မရှားနေ့တွေထဲက တစ်ရက်မှာပေါ့။ ပီရူးနိုင်ငံရဲ့ ဟိုး ဆင်ခြေဖုံးရွာငယ်လေးက စိတ်ပူပန်နေပုံရတဲ့ မိသားစုတစ်စုဟာ သမီးငယ်လေး လက်ကိုဆွဲလို့ ဆရာဝန်ဆီ ရောက်လာပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့ သမီးငယ်လေးရဲ့ ဗိုက်ဟာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုပိုဖောင်းလာတာကြောင့် တစ်ခုခု မူမမှန်ဘူးဆိုတာ သိပြီး ခေါ်သွားခဲ့တာပါ။ မစမ်းသပ်ခင်ကတော့ မိခင်ဖြစ်သူကလည်း ဗိုက်ထဲမှာ အကျိတ်တစ်ခုခု ရှိနေတယ်ဆိုပြီး စိုးရိမ်ခဲ့တာပေါ့.. တကယ့်တကယ် စမ်းသပ်တော့မှ ဆရာဝန်ရော၊ မိခင်ဖြစ်သူပါ မျက်လုံး ပြူးရပါတော့တယ်… ဟုတ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ထင်သလို သူ(မ) ဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေခဲ့တာပါ။ ကိုယ်ဝန်တောင်မှ ၇လရှိနေပြီဆိုတော့ နေ့စေ့လစေ့နီးနီးပေါ့…
သြော်.. မိန်းကလေး.. အပျိုဖော်ဝင်ရင် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်တာပဲ ဒါသိပ်မှ မထူးဆန်းတာလို့ ခင်ဗျားတို့ တွေးမိကြမလား?? ဒီမှာ ဆန်းကြယ်တာ လာပါပြီ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒီကလေးမလေးရဲ့ အသက်ဟာ (၅) နှစ်ကျော်ကျော်သာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီအချိန်ကနေ ၆ ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက် မေလ ၁၄ရက် ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာတော့ (၅) နှစ်နဲ့ (၇)လအရွယ် လီမာ မက်ဒီနာ (Lima Medina) လေးဟာ ကိုယ်အလေးချိန် ၆ ပေါင်ရှိတဲ့ သားလေးတစ်ဦးကို မွေးဖွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီကလေးလေးကို Gerardo လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပြီး ကလေးလေး ဆယ်ကျော်သက် ရောက်တဲ့အချိန်ထိ မက်ဒီနာကို သူ့အစ်မရယ်လို့ပဲ သိခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ ဆေးပညာသမိုင်းမှာ အတော်ကို ထူးဆန်းအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စကြီး တစ်ခုပေါ့… လီမာလေးဟာ သူ(မ)ကလေးရဲ့ ဖခင်ဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပေမဲ့ သူ(မ)ရဲ့ ဖခင်ရင်းဖြစ်သူကတော့ သမီးရင်းကို အဓမ္မကျင့်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီး တရားခံဖြစ်ကြောင်း သက်သေမရှိတာကြောင့် လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ သူဟာ သမီးဖြစ်သူအပေါ် ဒီလို အမှုမျိုး ဘယ်သောအခါကမှ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူ(မ)ရဲ့ အဖြစ်ကို အဖြေရှာကြတဲ့အခါမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခု ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ(မ)ဟာ စောပြီး အပျိုဖော်ဝင်တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသတဲ့… တချို့သော ဖော်ပြချက်တွေမှာတော့ သူ(မ) အပျိုဖော်စဝင်တာဟာ မွေးဖွားပြီး ၈လအကြာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပြီး တချို့သော ဖော်ပြချက်တွေမှာတော့ သူ(မ) အသက် ၃နှစ်အရွယ်ကစလို့ အပျိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ ခန့်မှန်းချက်တွေပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ သူ(မ)အကြောင်းဟာ သတင်းစာတိုင်းမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပါတော့တယ်။
လီနာ မက်ဒီနာလေးဟာ ဆေးရုံက ဆင်းပြီးကတည်းက ဘယ်မီဒီယာ၊ ဘယ်ရုပ်သံလိုင်းနဲ့မှ အတွေ့မခံဘဲ သီးသန့်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်လာထောင်ချီ၊ သောင်းချီပေးပြီး သူ(မ)အကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လေး ရိုက်ကူးပါရစေလို့ ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ သူ(မ)မိသားစုနဲ့ သူ(မ)ကတော့ ခေါင်းခါလျက်ပါပဲ… ဒီလိုနဲ့ လူအများစုရဲ့မျက်စိရှေ့ကနေ ပုန်းကွယ်နေရင်း ၁၉၇၀ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ သူ(မ) အိမ်ထောင်ရက်သား ကျခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ခု လီနာမက်ဒီနာ အသက်(၃၉) နှစ်အရွယ်မှာတော့ သူ(မ)ရဲ့ ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်သူကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
သူ(မ)ရော၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူပါ မချမ်းသာကြသူချည်းမို့ သူ(မ)တို့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ထိ တွဲလက်တွေ မြဲနေပြီး Chicago Chico လို့ခေါ်တဲ့ နေရာလေးမှာ နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာကလွဲပြီး နောက်ပိုင်း သူ(မ)တို့အကြောင်း ဘာမှ မသိရတော့ပါဘူး။ စပ်စုတတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ မျက်လုံးအောက်မှာ နေရတာထက် ဒီလိုနေတာက သူ(မ)ကို ပိုပြီး အေးချမ်းစေတယ် ထင်ပါရဲ့နော်… သူ(မ)သာ တကယ်လို့ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် အသက် ၈၆ နှစ်လောက်တော့ ရှိလောက်ပြီပေါ့…
သူ(မ) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုတော့ ခုချိန်ထိ အဖြေရှာလို့ မတွေ့သေးပါဘူး။
Ref: “All That Interesting “Lina Medina” , The Famous People “Lina Medina” , Onedio “the-true-story-of-lina-medina-the-five-year-old-girl-who-gave-birth”, The Vintage News “Lina Medina”
Previous Previous post: ကျောင်းသားတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး တိုးတက်လာစေမည့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ကျောင်းတွေမှာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမည်
Next Next post: ONE: REIGN OF VALOR ပြိုင်ပွဲကြီး၏ အဓိကတွဲဆိုင်းကို ကြေညာ